Tokyo Fiancée(2014) | MM Movie Store
ဒီတဈခါတော့ အိမျတှငျးအောငျးနရေတဲ့ ဖနျတှအေတှကျDrama/Romance/Comedyကားလေးနဲ့ ဖြျောဖွတေငျဆကျပေးပါရစေ. ဒီကားလေးကတော့IMDb6.1/10ရထားတာကွောငျ့ ဇာတျကားကောငျးလေးတဈကာ ဖွဈတာကို အထူးတလညျပွောဖို့လိုမယျမထငျပါဘူးနျော
ဇာတျလမျးထဲမှာ ဘယျလျဂြီယံသူဖွဈပမေယျ့ဂပြနျမှာမှေးခဲ့တဲ့ အမျမီလီဟာ ဂပြနျကို ခဈြမွတျနိုးတာကွောငျ့ သူ အသကျ20မှာ ဂပြနျကို ပွနျလာခဲ့ပါတယျ.ဂပြနျကို ရောကျနခြေိနျမှာ တဖကျတဈလမျးကနေ ၀ငျငှရေအောငျ ဆိုပွီး အခြိနျပိုငျးပွငျသဈစာသငျပေးဖို့ လုပျခဲ့ပါတယျ.
အဲ့အခြိနျမှာပဲ ပွငျသဈစာကို စိတျဝငျစားတဲ့ ဂပြနျကောငျလေး ရငျရီဟာဆကျသှယျလာခဲ့ပါတယျ.အဲ့နောကျမှာ သူတို့နှဈယောကျဟာ ပွငျသဈစကားသငျရငျး ခငျမငျရငျးနှီးလာခဲ့ပါတယျ.
ခငျမငျရငျးနှီးမှုကနေ အဆငျ့တှပေိုလာရငျး ထူးဆနျးတဲ့ကံကွမ်မာအလှညျ့အပွောငျးကွောငျ့ဘယျလိုတှေ ဖွဈတယျဆိုတာကို ရိုကျပွထားတဲ့ ဒရာမာဇာတျကားကောငျးလေး ဖွဈတာကွောငျ့ ဒရာမာနှဈသကျသူတို့ လကျမလှတျပဲ ကွညျ့ရှူသငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈကွောငျး ညှနျးလိုကျရပါတယျခငျဗြာ..
okyo Finance2014 ဒီတစ်ခါတော့ အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ ဖန်တွေအတွက်Drama/Romance/Comedyကားလေးနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးပါရစေ. ဒီကားလေးကတော့IMDb6.1/10ရထားတာကြောင့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကာ ဖြစ်တာကို အထူးတလည်ပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံသူဖြစ်ပေမယ့်ဂျပန်မှာမွေးခဲ့တဲ့ အမ်မီလီဟာ ဂျပန်ကို ချစ်မြတ်နိုးတာကြောင့် သူ အသက်20မှာ ဂျပန်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်.ဂျပန်ကို ရောက်နေချိန်မှာ တဖက်တစ်လမ်းကနေ ၀င်ငွေရအောင် ဆိုပြီး အချိန်ပိုင်းပြင်သစ်စာသင်ပေးဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်.
အဲ့အချိန်မှာပဲ ပြင်သစ်စာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဂျပန်ကောင်လေး ရင်ရီဟာဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်.အဲ့နောက်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ပြင်သစ်စကားသင်ရင်း ခင်မင်ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်.
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကနေ အဆင့်တွေပိုလာရင်း ထူးဆန်းတဲ့ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းကြောင့်ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းလေး ဖြစ်တာကြောင့် ဒရာမာနှစ်သက်သူတို့ လက်မလွှတ်ပဲ ကြည့်ရှူသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ..